Ukuqala ngenkukhu emva koko emva koko iqanda: ukukhula kunye nophuhliso
NguJulie Gauthier, uRob Ludlow
Ke ithini impendulo kumbuzo weminyaka ubudala: Yeyiphi eza kuqala, yinkukhu okanye iqanda? Ewe, apha, uqala ngenkukhu kwaye uphele ngeqanda. Endleleni, ufumanisa ukuzala kunye nokuphuma kweenkukhu.
Xa iinkukhu zifikelela ekuvuthweni ngokwesondo
Amantshontsho asetyhini amancinci ( iipullets ) Iintlobo zala maxesha, ezinje ngeentlobo zorhwebo zeLeghorns, ziqala ukubeka amaqanda malunga neeveki ezili-18 ukuya kwezingama-21 ubudala kwaye zineenyanga ezisi-8 ubudala xa zifikelela kwimveliso ephezulu yamaqanda. Endala, okanye ilifa, iintlobo zeenkukhu ziqhakaza kade; ziqala ukubeka amaqanda malunga neenyanga ezintandathu ubudala. Emva kokuba i-pullet ifikelele ekuvuthweni, izinto ezintathu ziyahlangana ukumisela ukuba uza kulibeka nini iqanda lakhe kuqala:
Inani leeyure zokukhanya alibona ngosuku
Ipesenti yomzimba wakhe
imifanekiso ye-30 mg oxycodone
Ukuze isikhukukazi sibeke amaqanda, ubukho beqhude abuyomfuneko (uyahamba, ntombazana). Ukuze inkukhu izale amaqanda achumileyo, aqanduselekayo, umqhagi nenkqubo yayo yokuzala esempilweni zizinto ezibalulekileyo.
Ukuqala malunga neenyanga ezi-4 ukuya kwezi-5 ubudala, amantshontsho aselula ( iqhude ) ukufikelela ekuvuthweni ngokwesondo, ukuvelisa isidoda kunye nokwenza njengamaqhude. Banokuhlala bechuma kangangeminyaka eliqela, nangona ubuninzi kunye nomgangatho wesidoda esiveliswa ngumqhagi kuncipha njengoko bekhula.
Ngexesha le-molt, kwaye ngexesha lokunciphisa iiyure zasemini ekwindla nasebusika, isikhukukazi sihlala sithatha ikhefu kwaye siyeke ukubeka amaqanda. Iphecana lakhe lokuzala liyancipha libuyele kubukhulu obaliye xa wayeyi-pullet. Umqhagi, naye, uthatha ikhefu kwiintsuku ezimfutshane zobusika, kwaye ukuchuma kwakhe kuyancipha ukulungiselela ixesha lonyaka, ukubuya entwasahlobo.
Ukuzalisa ngokwembono yenkukhu
Intshontsho lemazi liqanduselwa ngee-ovari kunye nee-oviducts (ekhohlo nasekunene) nawo onke amaqanda eliya kuwabeka. Emva kokuqandusela, nangona kunjalo, kuphela yi-ovary yasekhohlo kunye ne-oviduct ekhulayo. Ukuba kukho into engahambi kakuhle nge-ovary yasekhohlo kunye ne-oviduct ngexesha lobomi bakhe, akanaso isicwangciso esilungileyo sokugcina.
Xa isikhukukazi sisenza amaqanda, okanye ebhedini, isibeleko sakhe sikhangeleka njengesixa seediliya eziqaqambileyo ezimthubi ezinobukhulu obahlukeneyo. Inkqubo yokwenza iqanda iqala xa kukhutshwa enye yeediliya ezinkulu kwi-ovary ( ovulation ) malunga nemizuzu engama-30 emva kokubekwa kweqanda elidlulileyo, ngesiqhelo kusasa, kwaye phantse kungabikho nasemva kwentsimbi yesi-3. Kulapho ke kufuneka eye kwiklasi yokujikeleza (edlala nje!).
Ityala: Umzekeliso kaKathryn Born
Idiliya enkulu emthubi ekhutshwe kwi-ovary iya kuba sisikhupha seqanda elitsha. Inxalenye yokuqala ye-oviduct, infundibulum , ibukeka kwaye isebenza njenge-catcher's mitt ukubamba i-yolk ekhutshweyo.
Ukuba isidoda somqhagi sichumisa iqanda, kuyenzeka kwi-infundibulum. Ukusuka apho, iqanda elisaphuhlayo lihamba lonke i-oviduct yeenyawo ezimbini. Ngapha koko, amacandelo e-oviduct yi-magnum, isthmus, igobolondo yegland, kunye nelungu lobufazi, eliphelela kwi-cloaca apho kubekwe khona iqanda. Itheyibhile ibonisa umgca wexesha kunye nesiganeko esenzeka kwindawo nganye yokumisa kwindlela ehamba nge-oviduct yenkukhu. Umgca wendibano iyonke uthatha malunga neeyure ezingama-25 ukuya kwezingama-26.
Umda weNdibano yeqanda
Leliphi Icandelo elongezwayo
Infundibulum Imizuzu eli-15 Yolk, isidoda (ukuba yimodeli echumileyo)
Magnum Iiyure ezi-3 Umhlophe weqanda
Isthmus Imizuzu engama-75 Iimbumba zeShell
Idlala leShell Iiyure ezingama-20 I-Shell (ngokucacileyo), i-eggshell pigment (ukhetho)
Ubufazi Kungekudala (imizuzwana embalwa) Bloom, ekwabizwa ngokuba yi cuticle (ukukhusela i-wax
Indima yeqhude ekuzaleni kwakhona
Umqhagi ugcina zonke izixhobo zakhe zokuzala ngaphakathi. Isende lakhe elinamasende amile okombotyi litshone ngaphakathi esiswini, ecaleni kwethambo lomqolo, ngaphezulu nje kwezintso. Iintaka ezingamadoda zahlukile koogxa bazo bezilwanyana ezincancisayo ngenye indlela ebalulekileyo - amadlozi omqhagi ahlala ematsha kwindawo eqhelekileyo (eshushu!) Kubushushu bomzimba wenkukhu, ngelixa izilwanyana ezanyisayo kufuneka zigcine isidoda sazo sipholile kancinci kuneqondo lobushushu bomzimba kumasende angaphandle.
Ukusuka kumasende omqhagi ngalinye, ityhubhu ebizwa ngokuba yi amadlozi uthwala isidoda kwi-cloaca. Umqhagi ubonakala ngathi akaphosi ukuba nelungu elisebenza kakuhle, kwaye ukudibana kufezekiswa ngokubeka i-cloaca yakhe ecaleni kwenkukhu ye-hen, kunye nokufaka isidoda apho.
Kwenzeka ntoni emva komlingane weenkukhu?
Emva kokukhwelana, isikhukukazi sigcina isidoda kwincinci amadlala amadlala , ibekwe phakathi kwelungu lobufazi kunye neqokobhe le-oviduct. Isidoda sinokuhlala kwiincindi zamadlozi zesilisa malunga neeveki ezimbini emva kokudibana.
Xa kubekwe iqanda, amanye amadlozi ayakhitshiswa ngaphandle kwamadlala kwaye afudukela kwi-oviduct ukuze achumise iqanda elilandelayo kumbhobho. Esi sisicwangciso esilungileyo sokugcina, kuba ukuba kukho into eyenzekayo kwindoda yomhlambi, iinkukhu zisenokubeka amaqanda achumileyo okwethutyana emva kokuba ihambile.
Iinkuku zizakubeka amaqanda achumileyo kwakamsinya nje emva kosuku lwesibini emva kokuba umqhagi uqalise ukwabelana ngesondo nokuchuma. Kungamthatha iintsuku ezimbalwa ukwenza ujikelezo kwaye adibanise nazo zonke iinkukhu, ke mnike iveki phambi kokulindela ukubona inqanaba eliphezulu lokuchuma emaqandeni. Sukuba nexhala, ngokuqinisekileyo uphantse wafika kumceli mngeni.
tv 150 3 phezulu
zithetha ntoni amandla emculweni
iziphumo ebezingalindelekanga zeBoniva ixesha elide
ukucima njani i-tab
windows 7 ayiqhagamshelekanga kwi-wifi